Waxaan dadka reer Koonfureedka ah u soo jeedinayaa in, Puntland iyo Somalilandba Aan iska Gooyno - Shaaciye.com
Waxaan dadka reer Koonfureedka ah u soo jeedinayaa in, Puntland iyo Somalilandba Aan iska Gooyno 06/07/2012 .
Salaamulaahi Caleeykum dadka Somaliyeed ee wanaaga u saaxiibka Ahoow.
Waxaan dadka reer Koonfureedka ah u soo jeedinayaa in, Puntland iyo Somalilandba Aan iska Gooyno Dhibaatada ay nagu hayaan darteed.
Ka soo bilaabato Sanadadii 1960 kii Waxaa Kusoo Qulqulaayey Gobolada, Shabelada dexe,Banadar, Shabelada Hoose, Bay iyo Bakool, Jubada dhexe, Jubada Hoose iyo Hiiraan, dad Ka imaanaayey Gobolada Somaliland, Puntland iyo Galguduud.
Waxaa Aduunka oo dhan caado u ah, hadii dad meel ka soo hajiraan dhib ku yimid dartiis, oo ay meel kale u soo haajiraan, in kuwaasi soo Haajiray la soo dhaweeyo.
Kuwii la soo dhoweeyeyna ay u ekaadan in ay yihin dad marti, ah. Oo ayan la, iman wax dulmi ah, oo ay si aad iyo aad ah ay u xaqdhowraan dadkii ay ugu yimaadeen deegaanka ay u soo haajireen. Hadaba manta waxaay goboladaas aan kor ku soo sheegay la ildaranyahiin, dhibaatooyin iyo dulmi ay ka geeysteen ilaa hadana ka gaysanayaan, Muhaajiriintii oga yimid Puntland, Somaliland iyo Galguduud. Dhibaatooyinka ay la, yimaadeen waxa ka mid ah, (1) Dowlad burburin (2) maal boob, (3) dhul boob (4) been aan laga sariiganaynin, 5. Qabyaalad fool xun oo ay si xun noola soo galeen. Runtii waxay ahaan jireen kuwo ka caagan oo aan aqoonin arimahaas aan kor ku soo xusay Gobolada koonfureed oo ah, Jubooyinka Shabeelooyinka, Banaadir, Hiraan & Bay & Bakool.
Waxaan ahayn dad xalaal quudato ah oo wixii Alla swt ku irsaaqo aaminsan. Intii aysan u imaanin Muhaajiriinta reer Puntland, Somaliland & Galgaduud. Waxaa ka mid aha hadaladooda ay ku faani jireen, dad aan wax dileyn oo aan wax dhacaynin ma dadbaa & wax la mid ah. Taasina waa hadaladii laqwiga aha ee markay noo yimaadaan ay ku hadli jireen. Waxaan dhihi karaa oo run ah in aysan jirin maanta meel ay ka taliyaan dadkii ku dhashay Gobolada Jubooyinka, Shabeelooyinka & Banaadirba ee iyaga xaqa u lahaa
talada Deegaanadooda. Nasiib daro dadka reer koonfur in ayba marnaba ka talinin aayaha deegaanadooda. Oo xoog & Qori caaradii lagu qabsaday deegaanadooda.
Sideedaba Deegaan maamulkiisa waxaa ku wanaagsan, dadkiisa ku dhashay.
Waayo kan dhashay wuxuu ku fikiraayaa sidii uu u hormarin lahaa.
Maanta bal eega xaladaa aan kusuganahay.
Waxay Somalida tirahdaa, QOF KARIS XUN ISNA KAAL, KU LEH. Waxaan murtidaas u soo qaatay, hadee idinkane bal ka xaab,xaabiya reer Dhibeedoow. Waakaase, ilaa & 1969 kii ayeey caga dhigan ladahay oo lawaayey Xukuumad wanaagsan oo lagu nasto.
Cadaalad la,aantaasi awigeed.
Xaqdarada ay galayaan reer dhibeedka darteed.
Runtii dhibkii iyo xaqdaradii aad samayseen ayaa maanta dib idiinku soo noqday idinka.
Hada Maxaa Xal ah? Waxaa Reer Koonfur hadaan nahay xal noo ah in ay naga Go,aan dhamaan, Gobolada reer
dhibeedka, oo kala ah Puntlaand iyo Somaliland.
Bal dib u firiya Dowladihii Somaliya soo maray & sababihii burburiyey.
Dowladii, Abdirashid Ali Sharmarke waxaa riday oo dilay, reer Putland.
Sidaas waxaa fursad ku helay ay dalka ku qabsadeen, Dowladii Milatariga ee uu hogaaminaayey Mohamed Siyaad barre, sanadkii 1969ka.
Ayada oo ay dadka Dowlad haystaan oo loo riyaaqsanyahay, waxaa mucaaradid
ku bilaabay reer Puntland.
Waxaa ku soo biiray reer Somaliland, ilaa ay dowladii ka ridaan.
Ka dibna Ummadii ay isku dhexyaacdo oo nin walba uu qori qaatay.
Ma aha in aan leeyahay Dowladii towrada way wanaagsanayd.
Oo runtii wanaag way ka fogayd. Laakiinse ma ahayn in magacii Dowladnimo labaabiyo.
Waayo Dowlad la,aan Dowlad xun baa dhaanta.
Madaxweynah xun ayaa rida ee
Dowladnimada oo dhan lama baabiyo.
Dad baa yiraahda dadka reer Muqdisho may Dowlad dhisaan oo
ay wadanka dajiyaan.
War dadka reer muqdisho goormay wax dajiyaan, Guri afarta dhinacba Qori dab ah aad kaga dhajiseen oo gubanaaya, dab damiskiina aad horay u sii qaadateen ayaad oga cararteen.
Markaasaa waliba dhinacay ka soo damiyaanba dabka aad ku sii Qabataan. Aniga oo reer Koonfureed ah waxaan ku talinayaa in
aan iska gooyno, Gobolada aan kor ku soo sheegay. Gaar ahaan, Puntland & Somaliland. Si dhibkooda
uu nooga haro oo dabayl qaboow ay u helaan dadka
Oo sanooyin badan la dagi waayey dhibaatada goboladaas aan soo sheegay ay ku hayaan.
Gobolada koonfur, Somalia waa barwaaqo dhinacwalba ilaah swt hodan ka dhigay.
Somaliland & Putland ayaga ayaa u baahan Gobolada Koonfureed, ee Gobolada Koonfureed uma baahna, Puntland, Somaliland & CID kale toona.
Mohamed Omar Osman North America World9peace@yahoo.com